Iyo firita yezvinhu yesimbi isina simbi sintering mambure inonzi seye simbi isina sintering firita chinhu. Iyo firita chinhu chakagadzirwa neyakajairwa mashanu matete esintering mambure ne superposition uye vacuum sintering. Sefa chinhu chesimbi isina tsvina sintering skrini inogadzirwa neasina st ...
1. pane chakamisikidzwa chiyero chikamu cheiyo sintered firita chinhu? Ini ndinogona kutenga standard firita element? A: ndine hurombo, iyo sintered firita chinhu hachisi chikamu chakajairwa. Kazhinji, inogadzirwa nemugadziri zvinoenderana nematanho ehunhu hwakadzama senge saizi, chimiro, zvinhu uye firita val ...
Kuziva kwesimbi isina waya waya waya
Sekureva kwezvinhu zvakasvibirira, simbi isina waya simbi waya inogona kukamurwa kuita mhando mbiri: silika skrini uye yesimbi waya skrini. Iyo silika skrini ndiyo yekutanga skrini, uye iyo isina simbi skrini inoshandurwa kubva pasilika skrini. Stainless simbi pajira riya inowanzo shandiswa kuongorora uye kusefa unde ...
YeMotokari Sefa, Sefa Yemvura, Mafirita Emhepo, Stainless Simbi Sefa, Industrial Gasi Sefa, Stainless Simbi Mhepo Kuchenesa,